Ramangwana reOracle E-Business Suite uye Major Updates Mugore Richauya
E-business suite kunokonzera kufarira kwebhizimisi nokuda kwezvikonzero zvakakodzera. Oracle ndiye piyona wekuvandudza, kushambadzira uye kutengesa purogiramu yekombiyuta, mashandisirwe emakore uye Enterprise Software Programs. Sangano rinoramba richichenesa maOracle E-business Suite kuti riite-ramangwana. Gore RNUMX rakaona Oracle kushanduka rikava rechipiri guru mukugadzira software, shure kweMicrosoft. Iwe uri kunyanya kufarira kuziva here kuti ichaita sei uye inoshanda mumakore mashomanana? Heino nhau yose, inotsanangurwa muchidimbu:
Ndeipi Ramangwana reOracle E-Business Suite?
Major Updates In Upcoming Years
Basa reE-bhizinesi Suite Suite muzvinabhizimisi:
EBS kana Oracle E-business Suite inopa mabhizinesi ekushanda imwe purazi sevhavha ine database imwe chete. EBS inowedzera
Shanduro huru yeEBS yakatangwa mu2007 uye kubvira ipapo yakasvika kure. Parizvino, shanduro yezvino ye Oracle iri pa 12.2.6 uye inenge ichida kutumira shanduro inotevera mu2019 kana 2020 ine huwandu hwekuvandudza.
Iko huru yeEBS yakatangwa mu2007 uye kubvira ipapo yakasvika kure. Parizvino, shanduro yezvino ye Oracle iri pa 12.2.6 uye iri kuda kutumira shanduro inotevera mu2019 kana 2020 ine hukuru hwekuvandudza.
1. Zvinyorwa zviviri-kuwedzera:
Tinofanira kuva takagadzirira kupupurira vaviri pedyo nekuvandudza rinobudisa 12.2.7 uye 12.2.8 ne2019.
2. Mhepo yakachengeteka yakawanda:
Oracle iri kugadzirira pakupa gore rakachengeteka mabasa kumasoja ehurumende kana hurumende dzisati dzisina chikonzero chekuenda kumakore masikati. Nhoroondo yakagadziriswa inobatwa nemasangano akazaruka inowanzosangana nekutyisidzika kwekuvhiringidza uye Oracle iri kukonzera pasi nokuda kwe12.3 kubudiswa kweEBS iyo inogona kugamuchirwa ne100% yakachengetedzwa nzira yekutumira data.
3. Ramangwana Cloud:
Sangano iri rinowedzera kushandisa SaaS (software-as-a-service) kuita kuti bhizinesi rikwanise kushandisa ruzivo rwakanyanya ne2030. Mwariwin kubva kuOracle akadzokorora mabhizinesi, ayo anotamira kuEBS panguva yakakodzera, achaona maawa matsva eHawaS ari kuiswa muchisangano.
Bhuku rekuchengetedza mabhizimisi, kushandiswa kwebhizimisi, kukwira mari, kuburitswa kwehupoti, cloud-based storage ndevamwe ma modules, izvo zvingakurumidza kushandiswa muEBS. The adaptive Intelligent SaaS anoshandisa Oracle, uyewo, nokukurumidza kugunzva nheyo kuti ive nechokwadi chekushanda zvakanaka.
Swazi dzeSainhau chinhu chinochera-kubata mazuva ano. Oracle inyanzvi maawa eSawaS kune simba Predictive Analytics yekutengeserana kwezvinhu mumabhizimisi. Izvo zvitsva zvinoshandiswa zvinonzi ndezvakawandisa zvakanyanya uye zvinowedzera kushandiswa kwemichina.
5. Mobile mafambiro:
The mobile compatible compatible software ndiyo inonyanya kukosha yeOracle uye yakwikwidzana nayo munguva iri mberi. EBS ndiyo imwe nzvimbo yakadaro iyo Oracle iri kuedza kuedza kuenderera kune Mobile Mobile uye naizvozvo zvakare kusvika mugore kuti pa-pane chikwata.
Nzira yekugadzira sei basa semudzidzisi weEBS?
Ne Oracle iyo inofanirwa kutaurira huwandu hweEBS muMabhizimisi, zvinodiwa neEBS unyanzvi hunofanirwa kukura nekukwirira uye kumiganhu. Chido che Oracle chiziviso chepamusoro chemhando yepamusoro kune yese itsva yekuvandudza kusunungurwa. Muchiitiko chekuti iwe unenge uchitanga kutanga basa rako rehutori semuongorori weOracle EBS, unofanira kuenda kune Oracle Certification.
Ndezvipi zvingaitwa neOracle EBS certification?
Mamwe mabhizinesi makuru achaenda kuOracle E-business Suite. Nokudaro, kukosha uye zvidzidzo zvayo zvechigadziro chekudzivirira chikwata chichawedzera, kutora mimwe mikana yebasa uye mapepa akawanda ekubhadhara mugore ra 2019 ne2020. Ichava chifukidzo che:
Mazano anobatsira eDBB pfungwa uye SQL.
Maoko-paOracle 9i kana 10g.
Sangano reE-business Suite Administrator unofanirwa kuita zvinotevera:
Rongedza uye rega kudzivirira Data iyo inoda kutarisirwa kwebhizimisi
Ita basa rekushandura uye Zvinyorwa Zvitsva zvichienderana nenzvimbo inoda
Nyanzvi Dheinheyo kuburikidza kushandisa Kushanda Kweboka reEBS pakubika nokuongorora
Kuongorora Oracle Database Architecture yekushanda zvakakwana kushanda
Kuisa Oracle EBS Software
Kugadziriswa kweAracle Database
Kugadzirisa Dhaiguriro yeOracle maererano neruzivo rwekuita zvinodiwa
Iva nesimba rokuwanazve ruzivo
Kugadzirisa nekugadzirisa zvirongwa zvekuchengetedza
Oracle inoramba ichitsvaga mari muE-Business Suite yekuvandudza kusimbisa hutatu hunokosha
Mobility uye UI yemazuva ano
Oracle yave ichimhanya kuongororwa kwemashamba emakambani nemabhizimisi anotarisirwa uye iri kuvaka gwaro rakakwana kubva pane zvinodiwa nevatengi. Kuita kuti mutengi awane zvikomborero zve Cloud Infrastructure uye Applications kune vatengi, uye ngavaite kuti vabatsirwe zvakanakira kubhadhara muEBS, injini dzavo dzinoshanda nguva dzose. Kuvandudzwa kwechangobva kuitika hakuzoshanduri kuchinja zvakawanda muEBS, zvisinei kuti inorayirwa kuisa kukurudzirwa inobva SaaS kusvika kuEBS.
Iwe unogonawo kufarira:A Complete GuidekuOracle Certification
8 Zvinhu Zvinokosha Zvaunofanira Kuziva Nezve ITIL Course
ITIL: Kusiyanisa pakati peNyaya yeGadziriro neDambudziko reKubata